March 2022 – CELE WINGAGAR
သားလေး Liam နဲ့ခေတ္တခွဲနေရတာမို့ မွေးစားထား တဲ့ သားသားလေးကိုပဲ ချစ်နေရ ကြောင်း ပုံလေးတင်ကာ ပြောပြလာတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး….
March 31, 2022 100million 0
သားလေး Liam နဲ့ခေတ္တခွဲနေရတာမို့ မွေးစားထားတဲ့ သားသားလေးကိုပဲ ချစ်နေရကြောင်း ပုံလေးတင်ကာ ပြောပြလာတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး.. အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးလွင်မိုးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. လွင်မိုးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ […]
အခါခါပြန်ကြည့်တိုင်းမရိုးနိုင် အောင် နုပျိုလှပနေဆဲ အလှ တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မိုးဟေကို….
အခါခါပြန်ကြည့်တိုင်းမရိုးနိုင်အောင် နုပျိုလှပနေဆဲ အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မိုးဟေကို.. မိုးဟေကိုကတော့ ခုချိန်ထိကို ကြာကြာကြည့်လေ ဆွဲဆောင် မှုပိုပြီး အလှတိုးလာလေဆိုတဲ့အလှမျိုးနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းဝါစိုပြေတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမက နေရာဒေသနဲ့ […]
သူမချစ်ရတဲ့မိခင်ကြီးမကွယ်လွန်ခင်ကနောက်ဆုံးမှတ်မှတ်ရရပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လေးအကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဈူးဈူးဈာန်
March 30, 2022 100million 0
ပရိသတ္ႀကီးေရ စူးစူးစ်ာန္ကေတာ့ MRTV4ဇာတ္လမ္းတြဲေ တြကေနပရိသတ္ေတြသေဘာက်အားေပးဝန္းရံခံရ တဲ့မင္းသမီးေခ်ာေလးတစ္ဦးပါ။ အၿမဲ က်ရာဇာ တ္ေကာင္ကိုပီျပင္ေအာင္အၿမဲႀကိဳးစားသ႐ုပ္ေဆာင္ တတ္တဲ့မင္းသမီးေခ်ာေလးတစ္လက္ပါ။ လက္ရွိMRTV 4မွာျပသေနတဲ့ ဆုေတာင္းဇာတ္လမ္း တြဲမွာလည္း ပါဝင္ထားတာပါ။ အေမတစ္ခုသမီးတစ္ခုဘဝနဲ ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့သူမအေနနဲ႔ မိခင္ႀကီးဆုံးပါးသြားတဲ့ အခါ […]
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာမှာ Mr.Maung အဖြစ်နဲ့စကစရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ပြောပြဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်…
March 28, 2022 100million 0
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာမှာ Mr.Maung အဖြစ်နဲ့ စကစရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ပြောပြဖော် ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်… ပရိသတ်ကြီးရေဒါရိုတ်တာကိုပေါက်ကတော့လက်နက်အားကိုးပြီးပြည်သူတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ စစ်တပ်ကို ဒူးမထောက်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုပေါက်ကစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူရေးထားတဲ့စာဆောင်လေး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး […]
Live Sale ပြီးသွားတာတောင် ရောင်းအားက ဆက်တက်နေတုန်းမို့ ဆိုင်ရှင်က အိမ်အထိ Suprise ပိုက်ဆံပန်းစီးကြီးပို့ပေးတာခံလိုက်ရတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…
March 27, 2022 100million 0
Live Sale ပြီးသွားတာတောင် ရောင်းအားက ဆက်တက် နေတုန်းမို့ ဆိုင်ရှင်က အိမ်အထိ Suprise ပိုက်ဆံပန်းစီးကြီးပို့ ပေးတာခံလိုက်ရတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်… ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်ကတော့ live sale ဘုရင်မလို့တောင်တင်စားရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိ​ နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်ကတော့တန်ဖိုးကြီ […]
သူမကိုယ်တိုင် ကြိုးစားလို့ငွေတွေသုံးလာနိုင်တာကို လိုက်ပြီးမနာလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို အထိနာသွားအောင်ပညာသားပါပါပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ႏႈိင္းယွဥ္ျ မင့္မိုရ္ကေတာ့အႏုပညာနယ္ပယ္မွာဇာတ္ပို႔အေနနဲ႔သ ာလူသိမ်ားလာခဲ့ေပမယ့္ live လႊင့္ၿပီးေစ် းေရာင္းတဲ့ေနရာမွာေတာ သူမတူေအာင္ေ အာင္ျမင္လာတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေ န႔မွာေတာ့ ႏႈိင္းယွဥ္ကသူမ်ားရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ ကိုမနာလိုၿပီးလိုက္ blame ေနတဲ့သူေတြကိုထိထိ မိမိျပန္ေျပာလာတာျဖစ္ပါတယ္။ႏႈိင္းယွဥ္ကခု လက္ရွိမွာ သုံးႏိုင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို အရင္တုန္ းက မေနဖူးမစားဖူးဘူးလို႔ blame လိုက္တာဟာ ဒီလူ က ဒီကာလေတြမွာ develop […]
အသက်၃၁နှစ်အရွယ်ထိ မိန်းမမယူသေးသဖြင့် မိဘများက သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးလို လုပ်ခိုင်းခဲ့သောကြောင့် မပြုံးနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရသည့်အမျိုးသား
လူတို႔သည္ကားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္ကူးယဥ္ေတြးေတာမ ႈမ်ားဟာ တူညီမႈမရွိၾကေပ။အခ်ိဳ႕မိဘတို႔သည္ သား သမီးတို႔ကို အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မိဘတို႔သည္ သားသမီးေလးတို႔ အိမ္ေထာင္ျ ပဳသည္ကို လိုလိုလားလားရွိၾကေပသည္။ ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Thanh Xuanခ႐ိုင္တြင္ေနထို င္ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အသက္၃၁ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖ […]
ကြည့်ရှုသူတွေ အားလုံးပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားလောက်အောင် ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အပြတ်ရိုထားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပုံရိပ် တွေကို ထပ်မံချပြလိုက်ပြန်တဲ့ နေတိုး
ေနတိုးဆိုတာနဲ႔ မိန္းကေလးေတြသာမကေယာက္် ားေလးေတြကပါ အားေပးခ်စ္ခင္ေနရတဲ့မင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီ းေတြ မ်ားစြာ႐ိုက္ကူးရၿပီး အကယ္ဒမီဆုေတြမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္တစ္​ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အႏုပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းပါေလးစားခ်င္ခင္ေနၾကသူ တစ္ေယာက္ပါ။သူကေတာ့မၾကာမီလပိုင္းအတြင္ကေ တာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတိုးကေတာ့မၾကာေသးမီကမွ ရခိူင္မေလ းနဲ႔ တရားဝင္ေ႐ႊလက္တြဲခဲ့ၿပီးအားလုံးလည္းထင္မွတ္မထာ းခဲ့ဘဲ အံ့ၾသခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။သူရဲ႕လက္ထပ္ပြဲေလးဟာ လည္း ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာမလုပ္ခဲ့ပဲ ရင္းႏွီးတဲ့သူမ်ားနဲ […]
အမြင့်ဆုံး ဆယ်နှစ်အထိ ထောင်ဒါဏ် ချမှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မဖြင့် ထပ်တိုး တရားစွဲ ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်…
သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက် အား အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၁ဝနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့်ပုဒ်မ (၂၃) ဖြင့် ထပ်တိုး တရားစွဲသရုပ်ဆောင်ရဲ တိုက်အား စွဲဆိုထား သည့် မူးယစ်ဆေး ဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်း လဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ (ဂ)အပြင် အမြင့် ဆုံးထော င်ဒဏ် […]
စူးရှပြီး ယောကျ်ားပီသ လွန်းတဲ့ အကြည့် ပုံရိပ်တွေနဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက မိန်းမလှ လေးတွေကို ကြွေစေပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်…
March 26, 2022 100million 0
မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန် ကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေး မှုကို ရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးပရိသတ် တွေကြားမှာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန် ကတော့ မျက်နှာပွင့်တဲ့ မင်းသားချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်ပြီး Body တောင့်တဲ့ပိုင်တံခွန်က မိန်းကလေး […]